Sawiro:Kumanaan ruux oo isaga barakacay North Carolina iyo duu... | Universal Somali TV
Sawiro:Kumanaan ruux oo isaga barakacay North Carolina iyo duufaanta Florence oo si xowli ah ku socota
Duufaan xoogan oo lagu magacaabo Florence oo shalay galinkii danbe ku dhufatay gobolka North Carolina ee dalka mareykanka ayaa wali ku sii fiideysa qeybo ka mid ah gobolkaas iyadoo ku socota xawaare sare.
Daadad xoogan oo ka dhashay duufaanta ayaa waxaa sidoo kale ay saameeyeen degaanada hoose ee dhanka waqooyi bada gobolkan iyadoo muuqaalo saacadihii la soo dhaafay laga soo qaaday gobolka ay muujinayaan xowliga sare ee biyaha.
Saraakiisha duufaanada u qaabilsan mareykanka ayaa tilmaamay in saacadiiba ay Jareyso masaafo dhan 165 kiilo Mitir.
Waaxda qaran ee duufaanada u qaabilsan mareykanka ayaa sheegtay in maanta oo Jimco ah duufaanta la filayo in ay ku dhufato waqooyiga iyo koonfurta bada ka hor inta aysan u gudbin koonfur galbeed ee gobolkaasi.
Ku dhowaad 10 million dad lagu qiyaasay ayaa waxay ku nool yihiin dhulka ay ku dhufatay duufaanta sida laga soo xigtay waaxda saadaasha hawada iyadoo ay sidoo kale goobo ganacsi ay ku yaalaan goobaha ay duufaanta saameysay.
Dhanka kale in ka badan hal million oo ruux oo ku nool xeebaha waqooyi iyo koonfur ee gobolka North Carolina iyo Virginia oo aysan gaarin wali duufaanta ayaa loogu baaqay in si deg deg ah ay uga baxaan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dhankiisa ku booriyay dadweynaha in ay taxadar dheeraad ah muujiyaan.
Kan-xigaTurkiga oo wali wada daabulka ciidamo...
Kan-horeHey,adaha gargaarka oo walaac ka muuj...
53,503,634 unique visits